Izindaba - I-ABB ikhuthaza ukusheshiswa kokwanda kwama-motors asebenzisa ugesi kanye nama-inverters ukubhekana nokushintsha kwesimo sezulu
I-Rockwell Ics Triplex
I-ABB igqugquzela ukusheshiswa kokwanda kwama-motors asebenza ngogesi kanye nama-inverters ukubhekana nokushintsha kwesimo sezulu
Namuhla, i-ABB Group ikhiphe iphepha elimhlophe okokuqala ngqa, ichaza amandla amakhulu okusindisa ugesi ama-motors amasha kanye ne-inverter technology azoletha imboni nengqalasizinda, futhi bacela ohulumeni nezimboni ezivela emhlabeni wonke ukuthi basebenze ndawonye ukusheshisa ukwenziwa ngcono kwezobuchwepheshe nokuqhubeka ngempumelelo ukubhekana nokuguquka kwesimo sezulu.
Umbiko we-International Energy Agency (IEA) ukhombisa ukuthi ugesi wezimboni wenza ama-37% wamandla okusetshenziswa komhlaba, kanti izakhiwo nezakhiwo kudla u-30% wamandla omhlaba.
Yize ama-motors kanye nama-inverter engavamile ukubonakala emehlweni omphakathi, cishe yonke indawo. Kusukela kumaphampu ezimboni, abalandeli namabhande okuhambisa embonini yezokukhiqiza, kanye nezinhlelo zokuhambisa ngamandla kwezokuthutha, kuma-compressors ezintweni zikagesi nasezinhlelweni ze-HVAC ezakhiweni, ezimotweni nakuma-inverters kuyinani elikhulu lezicelo eziyisisekelo empilweni yethu yanamuhla. Isimo sinikeza umthombo wamandla.
Kule minyaka eyishumi edlule noma kunjalo, ubuchwepheshe bezimoto ne-inverter bukhuphuke kakhulu, futhi ukusebenza kahle kwamandla amakhulu kutholakele ngokwakhiwa kwanamuhla okusha. Kodwa-ke, kusenenqwaba yezinhlelo ezisebenza ngezimoto ezisebenzayo (cishe amayunithi ayizigidi ezingama-300 emhlabeni wonke) ahlupheka ngokusebenza okuphansi noma ukusetshenziswa kwamandla ngokweqile, okuholela ekusetshenzisweni kwamandla amabi kakhulu.
Ngokwezibalo zezikhungo zocwaningo ezizimele, uma lezi zinhlelo ezindala zithathelwa indawo yimishini eyonga amandla esebenza kahle, u-10% wokusetshenziswa kukagesi womhlaba wonke ungagcinwa, futhi ukuncipha okuhambisanayo kokukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa kuzohlangabezana nezinjongo zesimo sezulu zango-2040 zesiVumelwano saseParis. Ngaphezu kuka-40% wenani.
"Uma kuqhathaniswa nezinye izinselelo, ukwenziwa ngcono kwamandla kagesi ezimbonini kuyindlela enkulu yokubhekana nokuguquka kwesimo sezulu, futhi kungabizwa ngokuthi yisixazululo esingabonakali sesimo sezulu." UMongameli Womhlaba Wonke we-ABB Group Motion Control Division uMorten Wierod uthe, “Intuthuko esimeme i-ABB Ingxenye ebalulekile yemigomo yethu yokusebenza nayo iyingxenye ebalulekile yenani eliwumongo esilakhela bonke ababambiqhaza. Kuze kube manje, i-ABB ibithembele kubuchwepheshe obuphambili ukwenza yonke imizamo yokufaka isandla ekulondolozeni amandla nasekunciphiseni ukungcola emikhakheni yezimboni, ezokwakha nezokuthutha— —Ukusetshenziswa kwamandla kulezi zindawo kubanga cishe izingxenye ezintathu kwezine zokusetshenziswa kwamandla emhlabeni jikelele. ”.
Kuyiqiniso ukuthi ukwethulwa okukhulu kwezimoto zikagesi namandla avuselelekayo kuyindlela esebenzayo. I-ABB Group ikholelwa ukuthi nathi sidinga ukugcizelela ukubaluleka okulinganayo kubuchwepheshe bezimboni obungaletha izinzuzo ezinkulu kakhulu emvelweni nasemnothweni womhlaba jikelele.
"Besihlale sigcizelela ukuthi inani elikhulu lezicelo zamandla kagesi asebenzisa amandla kagesi kanye neziguquli embonini nasengqalasizinda zidlala indima ebalulekile ekukhuthazeni intuthuko eqhubekayo yomphakathi," kusho uMa Teng, "u-45% kagesi womhlaba usetshenziselwa ukushayela izakhiwo. Okwezimoto ekwenziweni kwezakhiwo kanye nasezimbonini, ukwandisa utshalomali ekuthuthukiseni izimoto kuzoletha inzuzo enkulu ngokusebenza kahle kwamandla. ”
Isikhathi Iposi: May-08-2021
I-HONG KONG SAUL Electronics LIMITED.